Nhau - Bhokisi Rekuzvichenesa Rinozvishambidza Rinoshanda Zvishoma?
Iri Kuzvichenesa-Litter Bhokisi Rinoshanda Zvishoma?
Ndicho chikamu chinonyanya kufarira chekatsi kurera: kuchenesa katsi marara bhokisi. Kusvikira izvo zvikaitika, kubuda kweako ekuzvichenesa-marara mabhokisi ekitsi kunogadzira sarudzo yekuti marara bhokisi rive rakachenesa mushure mekati yako.
Asi aya anozvichenesa-marara mabhokisi ekitsi haanyanyoita basa here? Iine akawanda masitaera uye dhizaini uye inogara-inowedzeredza vhezheni, pane zvakawanda zvingasarudzwa zvaunosarudza kubva kuti uwane iwo akakwana machisi iwe nekati yako.
Yedu E otomatiki Cat Litter Bhokisi rinoita kuti iwe ufunge kunze kwechinyakare katsi marara bhokisi kuti uone kana otomatiki marara bhokisi akakosha izvo.
Nheyo dzeKuzvichenesa-Marara Bhokisi
Uine yekuzvichenesa-marara bhokisi, dongo kamuri inopepeta, rakes, mafuru kana neimwe nzira inounganidza feline marara, ichikubvumidza iwe kushoma kusangana nekati weti nemasese uye kubvisa kudiwa kwekutora iwo marara tray zuva nezuva. Mazhinji emabhokisi emarara anozvionera kana kati yako yaashandisa uye achasuka kuitira kuti nguva inotevera pavanoenda, vave nemarara matsva, akachena.
Vanenge vabereki vekati vanoti pfungwa yekuzvichenesa-marara bhokisi yakanaka kwazvo, nekuti hapana munhu anofarira kuchenesa marara mabhokisi. Inoenda pamwe nekuva nekatsi, yakafanana nekufamba imbwa kana kuchenesa keji ye ferret.
Kuti tiite kuti katsi dzedu dziwirirane pakushandisa bhokisi, tinofanirwa kurichenesa zuva nezuva-kunyangwe kakawanda pazuva-basa rakaoma nemazuva marefu ekushanda uye zvakawanda zvekuita pamba. Kana iro bhokisi rikasatarirwa mune dzimwe dzimba dzakabatikana, izvo zvinogona kugadzira zvisina kufanira nyaya dzekubvisa. Asi otomatiki marara bhokisi anogona kubatsira kurerutsa iro dambudziko.
Nekudaro, kana mazwi "otomatiki marara bhokisi" akagadzira mufananidzo wepfungwa yenzvimbo isina basa, bvisa iwo mufananidzo! Yega otomatiki marara bhokisi achiri kureva rimwe basa, kunyangwe richizosiyana neyako marara emabhokisi maitiro. Otomatiki marara mabhokisi anozoda kuti iwe uburitse tireyi kana kamuri inobata yakasvinwa katsi tsvina pamwe nekutsiva kana kuzadza iyo marara ekati kuti bhokisi riite.